Ilebula le-Holographic Stickers elenziwe ngokwezifiso eliphrintiwe elenziwe ngokwezifiso, elenziwe ngokwezifiso elenziwa ngabaphikisi elenziwa ngabaphikisi elenziwe ngabakwaHolographic Stickers, Abahlinzeki, Ifektri - IHainan Tianjian Anti-Forgery Science & amp; Technology Co., Ltd.
Ikhaya>Product>Ilebula yokuphepha ye-foil stamping eshisayo>Kubhaliswe iHologram Hot Stamping Foil
Imiklamo eyenziwe ngokwezifiso ebhalisiwe futhi engabhalisiwe ye-Holographic Hot Stamping Foil inika umkhiqizo wakho umugqa ohlukile wokuhlobisa ngaphezu kwabaqhudelana, unezela inani lomkhiqizo futhi ukhulisa ukuthengisa. Lapha, ungahlala uthole umklamo ofanele wohlelo lwakho lokusebenza.
Amaphethini we-1.Various asukela kumachashazi, izikwele, iqhwa eliqhekekile, uthingo, izinsika zokukhanya, iziqhwa zeqhwa, iziphepho, njll.
Ububanzi, isisekelo, kanye nebanga phakathi kwama-hologram ngamanye we-Hot Stamping Foil kunqunywa nguwe.
I-logo yakho noma isithombe zingakhiwa
Izicucu ezihlikihla ziyatholakala ngegolide, ngesiliva, nangemibala ehlukene neminye imibala yensimbi.
Izicucu ze-5.Hot Stamping zisetshenziswa kusetshenziswa ukushisa nokucindezela (ukushisa ngesitampu).
6.Umfanekiso we-holographic awunakususwa ku-substrate ngaphandle kokushiya izimpawu ezibonakalayo zokuphonsa ithawula.
7. Sihlinzeke ngama-foil stamping foils ngendlela roll.
1. Indwangu: PET
2. Ukuqina okungalingani
3. Ukuqeda okuhle
4. Ukubukeka kobuhle
5.Ihlanganiswe nezici zokuphepha (iGuilloche, umbhalo weMicro, umbhalo ofihliwe, njll)
iphakethe likagwayi, ukupakishwa kwamabhokisi, amakhadi okubingelela, amakhadi omshado, ama-Pharma Labels, imikhiqizo enophawu, izitifiketi, amathikithi, izincwadi ezibuyiselwa emuva, ukuthengisa okukhuthaza, imikhiqizo yokuphrinta, izimonyo, ukukhangisa.
Intengo yefektri ephrintiwe ngokwezifiso yekhwalithi enhle yekhodi ye-anti-fake yokunamathisela amanzi
Amalebula wokushaya isitampu asezingeni eliphakeme enziwe ilebula lekhodi ye-anti-mbumbulu ye-holographic qr
Itheyiphu Yezinyembezi Yokusetshenziswa Okushisayo enezincwadi ze-holographic ze-3D kanye neLogo